Fanafihana « cash point » : Karohina fatratra i « Ndaty »
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2020 → août → 25 → Fanafihana « cash point » : Karohina fatratra i « Ndaty »
Efa maty voatifitra ny namany, i « Ndaty » kosa sisa na Ratahinjahanary Velomaro Tody Albert no mbola miriaria any. Izy ireo dia voalaza fa anisan’ireo atidoha nikotrika ireo fanafihana nitam-piadiana nisesisesy teo an-drenivohitra. Namoahana taratasy fampikarohana ity farany, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny polisim-pirenena.
Mbola mitohy hatrany ny fanadihadiana ataon’ireo tompon’andraikitra amin’izany mahakasika ny fikarohana ireo olon-dratsy tompon’antoka tamin’ireo fanafihana mitam-piadiana teto an-drenivohitra, izay nahalasibatra ireo toerana fangalàna vola, na « cash point », mpamongady ary fivarotana lehibe sasantsany, volana vitsy lasa izay. Raha ity i Ndaty ity dia voalaza fa izy no tao ambadik’ilay fanafihana nahavoatifitra ny tompon’ny cash point tetsy Ambohidahy Ankadindramamy.
Ny mombamomba an-dRatahinjanahary Velomaro Tody Albert, fantatra amin’ny anaram-bositra hoe « Ndaty », araka ny hita tao amin’ity taratasy fampikarohana lah: 725/MSP/SG/DGPN/DSP/CC.SP.TANA/SUT.20, nosoniavin’ny tompon’andraikitra ny 22 aogositra lasa teo dia : izy dia teraka ny 05 aogositra 1988 tao Soavinandriana Antananarivo, zanak’Atoa Tody Albert sy Ramatoa Bao Ndrama. Tao Ambatomaro, lot II G 10 bis XI no adiresy nahitàna azy farany ary tsy hita popoka intsony hatreto. Vesatra maromaro no anenjehana ity farany : fanafihana mitam-piadiana, fikambanan-jiolahy, firaisana tsikombakomba amin’ny olon-dratsy, sns … Araka ity taratasy fampikarohana nivoaka ny sabotsy lasa ity moa dia entanina ireo manam-baovao momba azy na mety hahafahana misambotra azy mba hampilaza haingana ny mpitandro filaminana akaiky azy ireo na ny polisin’ny Sut etsy Tsaralalàna ao amin’ny laharana 0340599847.